कुर्कुच्चालाई भान्साकै सामान प्रयोग गरेर चिल्लो बनाउनुस् - Himalayan Kangaroo
कुर्कुच्चालाई भान्साकै सामान प्रयोग गरेर चिल्लो बनाउनुस्
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ चैत्र २०७४, बिहीबार ११:१० |
काठमाडौ। जाडोमा कुर्कुच्चा फुट्ने समस्या अधिक हुन्छ । त्यसमा पनि कसै-कसैको त गर्मी लाग्दा समेत कुर्कुच्चा निको हुँदैन र चप्पल लगाएर हिंड्दा नराम्रो देखिन्छ । यसले गर्दा महिलाहरुले कुर्कुच्चाको लागि विभिन्न औषधि समेत प्रयोग गर्छन् । तर, कुर्कुच्चाको लागि यति धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। किनकी घरमै यी सामानको सहयोगले तपाईंले आफ्ना कुर्कुच्चा चिल्ला पार्न सक्नुहुन्छ :
राम्रोसंग पाकेको केराको पेस्ट बनाउनुहोस् र त्यसलाई पाइतालाको सबै भागमा लगाउनुहोस्। पेस्ट लगाइसकेपछि २० मिनेट राखेर पखाल्नुहोस्। दुई हप्तासम्म प्रत्येक दिन राती सुत्नुभन्दा अगाडी यो प्रक्रिया दोहोर्याउनु भयो भने तपाईंको कुर्कुच्चा मात्र नभएर पूरै पाइताला सुन्दर देखिनेछन्।
एक कप महलाई एक गमला मन तातो पानीमा मिलाएर खुट्टा डुबाउनुहोस्। २० मिनेट सम्म पानीमै मसाज गर्नुहोस्। त्यसपछि खुट्टालाई पुछेर सुक्खा बनाएपछि लोसन लगाउनुहोस्। यसलाई राती सुत्नुभन्दा अगाडी दैनिक रुपमा दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।
३. खाना बनाउने तेल
हरेक रात सुत्नुभन्दा अगाडी खुट्टा राम्रोसंग धोएर सफा गर्नुहोस् र सुख्खा बनाउनुहोस्। त्यसपछि खाना बनाउने तेल राम्रोसंग बाक्लो तह बस्ने गरि लगाउनुहोस् र सजिलो तथा खुकुलो मोजा लगाएर सुत्नुहोस्।
Previousबैंकमा सुनका नक्कली गरगहना राखेर ठगी !
Nextनेपालबाटै अष्ट्रेलियाको भिसा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको आग्रह
१९ जेष्ठ २०७५, शनिबार १४:०३
२० वर्षीय उज्जवललाई बचाउँन पुनः अपिल
४ चैत्र २०७१, बुधबार ०८:३५